အောင်သူငြိမ်း - ဘာတွေမှားနေသလဲ ဖိလစ်ပိုင် - MoeMaKa Media
Home / Aung Thu Nyein / Currents / Opinion / အောင်သူငြိမ်း - ဘာတွေမှားနေသလဲ ဖိလစ်ပိုင်
(မိုးမခ) မေ ၁၃၊ ၂၀၂၂
ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါးတပုဒ် ဖတ်ရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ဘုံးဘုံ (Bongbong) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မားကိုစ် ဂျူနီယာ အခုအပတ်အတွင်း သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်စပ်ရေးထားတာပါပဲ။ သူက ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တာကလည်း၊ တော်ရုံမဟုတ်ပါဘူး။ ပြိုင်ဖက် ရှေ့နေအမျိုးသမီးကို ၂ ဆကျော်အသာနဲ့ သောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်တာပါ။ မားကိုစ် ဂျူနီယာက တချိန်က လူထုအာဏာနဲ့ ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်း မားကို့စ်ရဲ့သားဖြစ်တာတော့ သိကြပါတယ်။ သတင်းတွေအရ မားကို့စ်က သူ့ကာလမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံလောက် ခိုးဝှက်ခဲ့သူပါ။ အဲဒါ အပြင် သူ့အမေ အီမဲလ်ဒါ မားကို့စ်ကလည်း ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဝင် ဖိနပ်‌တွေ အရံ ၃,၀၀၀ ကျော် စုဆောင်းခဲ့သူဆိုပြီး နာမည် ကျော်ခဲ့သူပါ။ သူတို့ရဲ့ သားဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။
အဲဒါအပြင် ဖာဒီနန် မားကို့စ် ဂျူနီယာကို သူ့မိဘတွေက နာမည်အမည်ပေးခဲ့ရုံမျှသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမွေ နဲ့ ဂုဏ် ထူးရာထူးတွေပါ ပေးခဲ့နိုင်သူပါ။ ပြည်ပကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့ကာလ ၅ နှစ်ကာလကလွဲရင်၊ ပြန်ရောက်ပြီး အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ်ကစလို့ နိုင်ငံရေးရာထူး ရာခံ နေရာ အမျိုးမျိုးမှာ ရလာခဲ့သူပါ။ ဒီလိုရလာခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဓနဥစ္စာ၊ အဆက်အသွယ် ကွန်ရက်တွေကြောင့်သာ ဒီလို ဖြစ်လာတာပါ။
အလားတူပဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာက သူနဲ့တွဲဖက် ဒုသမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူကလည်း ဆာရာ ဒူတာတေး (သမ္မတဟောင်း ဒူတာတေး) ရဲ့ သမီးပါ။ သူတို့ မဟာမိတ်ဖွဲ့မိကြပါတယ်။ ဒူတာတေးဆိုရင်လည်း မူးယစ်ဆေးနှိမ်နင်းရေး အကြောင်းပြလို့ သမ္မတ ၆ နှစ်တာကာလအတွင်း တရားမဝင် သတ်ဖြတ်မှု ၆၀,၄၃၉ ဦး ရှိခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွေမှာ စွဲချက် တင်ခံထားရသူပါ။ ဒါပေမယ့် လူပြိန်းကြိုက်ခေါင်းဆောင် သမ္မတ ဒူတာတေးရဲ့ လူသတ်ပွဲတွေကို လူထုတွေက ထောက်ခံကြပါတယ်။ ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေက နာမည်ကျော်သူ၊ အသံကျယ်တဲ့၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့၊ ခွန်အားဗလကြီးတဲ့ (loud, rude and macho) နိုင်ငံရေးသမားကို သဘောကျကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့လည်း အလုပ်သင် သူတော်စင်ကို ရွေးမိတတ်ကြတာမျိုး လည်း ရှိပါတယ်။
အာဏာရှင် မားကို့စ်က ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တရားဝင် သမ္မတရွေးချယ်ခံရသူပါ။ ယူကျုမှာတွေ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်သီချင်း “လူ့ဘောင်သစ်” ဆိုတာကိုတောင် သဘောကျမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဒုတိယသက်တန်းအပြီး ၁၉၇၂ မှာ မာရှယ်လောကြေညာလိုက်တာ ၁၄ တောင် ကြာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့မှာ “ပြည်သူ့အာဏာ” တော်လှန်ရေးနဲ့ ပြန်ဖြုတ်ချ၊ သူ့ဆရာကြီး အမေရိကန်က သူ့ကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့တင်ခေါ်ပြီး အမေရိကန်မှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့အာဏာတော်လှန်ရေး အပြီးမှာတော့ သူတော်စင်သဖွယ် ကိုရာဇန် အကွီနို (Cory Aquino) တက်လာပါတယ်။ လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတဦးရဲ့ ဇနီးပါ။ အဲဒီအချိန်ကတော့ လူတိုင်းက ဖိလစ်ပိုင် ဒီမိုကရေစီ ပြန်ဖြစ်ပြီလို့ ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ကာလပါ။
၁၉၉၈ မှာတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂျိုးဆက်ဖ် အီရပ် အက်စရာဒါ သောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ပြီး သမ္မတဖြစ်လာပါလေရော။ သူလည်း သူ့အသိုက်သူဆောက်လိုက်တာ ၃ နှစ်အကြာမှာတော့ အယုံအကြည်မရှိအဆို တင်ခံရပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့အာဏာ တော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီး၊ သူလည်း ထွက်ရပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစီရင်ခံစာ Global Transparency Report မှာတော့ မစ္စတာ အက်စရာဒါကို “ကမ္ဘာ့ အကျင့်ပျက်ခြအစားဆုံး ခေါင်းဆောင်များစာရင်းမှာ နံပါတ် ၁၀ နေရာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မားကို့စ်အကြီး စီနီယာကတော့ နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အက်စရာဒါအပြီး သဘောထားပျော့ပြောင်း၊ အရည်အချင်းလည်း အတန်ရှိတဲ့ သမ္မတ ၂ ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ၂၀၁၆ မှာတော့ လူကြမ်း၊ လူပြိန်းကြိုက်ခေါင်းဆောင် ဒူတာတေး (Rodrigo Duterte) က မဲသောင်ပြိုကမ်းပြိုနဲ့ သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။
ဒူတာတေးက လူတွေကို စော်ကားမော်ကားလုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူက ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ အိုဘားမားတို့ကို ဖာသည်မသားတွေ (son ofawhore) လို့ ခေါ်ပြီး စော်ကားခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ ကျေနပ်နေတာပါပဲ။ ဒူတာတေးကို လူကြိုက်များကြလို့ နိုင်ငံက ပညာရှိတတ်သိတွေတောင် ရင်မနေခဲ့ကြရပါတယ်။ အခုတော့ ဘုံးဘုံဆိုသူ မားကို့စ် ဂျူနီယာကို သောင်ပြိုကမ်းပြို ထပ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ဒီလိုပါပဲ အချို့နိုင်ငံတွေလည်း လူပြိန်းကြိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးတင်မိတာရှိကြပါတယ်။ ဟန်ဂေရီမှာ ဗစ်တာအိုဘန်၊ ဗြိတိန်မှာ ဘိုးရစ်ဂျွန်ဆင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၊ ဘရာဇီးလ်မှာ ဂျဲယား ဘိုလ်ဆါန်နာရို (Jair Bolsonaro) တို့လိုမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် တခနတာဆိုရင်တောင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက် ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ မှန်းဆကြည့်လို့ရပါ တယ်။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဘယ်လိုကြောင့်များ ဖြစ်ရပါသလဲပေါ့။ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လားဆိုရင်လည်း သူနဲ့အိမ်နီးချင်း အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ တိုင်းရင်းသားချင်း၊ ဘာသာစကားချင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုချင်း အတော့်ကို နီးစပ်ကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကတော့ ရေနံထွက်တာ ကြောင့် လူတဦးချင်းဝင်ငွေ (Per capita) က ၃၀% နည်းနည်း ပိုများပါတယ်။ စီးပွားရေး အခြေအနေကလည်း သူမသာ၊ ကိုယ်မသာပါပဲ။ နိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံး အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့ တော်လှန်အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတာလည်း တူပါတယ်။ (ဖိလစ်ပိုင်က ၁၉၈၆၊ အင်ဒိုနီးရှားက ၁၉၉၈)။ တခုကတော့ အင်ဒိုနီးရှားက မူစလင်များတယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ကတော့ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်မှုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကိုးကွယ်မှု လူနည်းစုအုပ်စုတွေလည်း ရှိနေကြတာပါပဲ။
အင်ဒိုနီးရှားက ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီကျသလိုပါပဲ။ ဖိလစ်ပိုင်လူထုတွေကတော့ နာမည်ပျက်လှတဲ့သူတွေကို အားတက်သရော ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
စာရေးသူ ဂွမ် ဒိုင်းယာ (Gwynne Dyer) က ဖိလစ်ပိုင်ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာ သူ့ရဲ့ သိပ်မခိုင်လှတဲ့ အနုမာန မှန်းဆချက် ၂ ခုကို ဖော်ပြပါတယ်။
ပထမတချက်ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သဘာဝမကျလှအောင် အလွန်ချမ်းသာ၊ အင်အားအာဏာကြီးတဲ့ မိသားစုကြီးတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ Powerful elite တွေပဲ ဆိုပါတော့။ သူတို့က ဒေသဆိုင်ရာအလိုက် အခြေခံခိုင်နေကြပါတယ်။ ဥပမာဖော်ပြရရင် အခုတပတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မကြာသေးခင်က မားကို့စ်မိသားစု နဲ့ ဒူတာတေးမိသားစု မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုက ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မားကို့စ်မိသားစုက ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာ အခြေခိုင်ပြီး၊ ဒူတာတေးမိသားစုကတော့ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းကို ခြေကုတ်ယူထားကြပါတယ်။
နောက်ထပ် အနုမာန ယူဆချက်ကတော့၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အရွယ်ရောက်သူ ၉၉% ဟာ အချိန်ပြည့် လိုင်းပေါ်ရှိနေကြတာပါတဲ့။ အသက် ၁၆ ကနေ ၆၄ အကြား ဖိလစ်ပိုင်တွေက ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ တရက် ၄ နာရီလောက် ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဘာတွေမှားနေသလဲ မြန်မာ” ကိုတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့သူပဲ ရေးကြပါတော့။
Gwynne Dyer, May 13, 2022. What's wrong with the Philippines? Bangkok Post. ဆောင်းပါးကို ကွန့်ရေးပါတယ်။
အောင်သူငြိမ်း - ဘာတွေမှားနေသလဲ ဖိလစ်ပိုင် Reviewed by Aung Htet on 10:38 PM Rating: 5